Ciidamo boolis ah oo tabbabar loogu soo xiray dalka Jabuuti – Radio Muqdisho
Ciidamo boolis ah oo tabbabar loogu soo xiray dalka Jabuuti
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Cabdi Xasan Xijaar ayaa magaalada Jabuuti ee Caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti tabbabar ugu soo xiray ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya.
Ciidamadan oo muddo saddex bilood ah tabbabar ku qaadanayay dalka Jabuuti ayaa la baray ilaalinta Madaxda, ka hortagga falalka argagixisada iyo kuwa rabshadaha wata, iyadoo munaasabaddii tabbabarka loogu soo xirayay ay goob joog ka ahaayeen saraakiil ka tirsan Booliska dalalka Talyaaniga iyo Jabuuti oo tababarkaan bixinayay.
Cabdullaahi Cabdi Faarax Taliyaha ciidanka booliska dalka Jabuuti ayaa ku booriyay ciidamada tabbabarka dhameystay inay isgarab taagaan ciidanka kale ee ka qeyb qaadanaya amniga guud ee Soomaaliya.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Cabdi Xasan Xijaar ayaa ku booriyay ciidamadan in cashirada ay barteen muddadii ay tababarka jireen uga faa’iideeyaan Ciidanka Booliska, isla markaana ay ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed.
Ciidamadan ayaa lagu wadaa inay ka qeyb qaataan xoojinta amniga caasimadda.